Rechi20 International Fair nokuda Environmental Protection (IFAT) muMunich, akanga grandly rakaitirwa New International Expo Center muMunich kubva May wa14 kusvika May rechi18, 2018. The Munich Expo rakaumbwa muna 1966, munyika dzakawanda nyanzvi wezvokutengeserana akanaka kuchengeta zvakatipoteredza . Somumwe chikuru dzemarudzi kuratidzira vanopupurirwa ne UFI, inotungamirira ichangobva zvinoitwa international nezvakatipoteredza kuchengetedzwa bhizimisi uye anozivikanwa somunhu yose chakarurama.
IFAT rave vakabudirira vachengeterwe 19 muzvirongwa uye ndicho chinhu chikuru uye chinokosha kutengeserana akanaka nokuda Environmental Protection indasitiri. The-zuva shanu inoratidzirwa ndokwenguva nzvimbo 260,000 mativi mamita. Rine 18 pamwero mukuru inoratidzirwa dzimba uye nhatu panze kuratidza nzvimbo. Chakasimudzira akaunganidza 3.304 exhibitors kubva kunyika 59 uye mwoyo kupfuura 135,000 yose nyanzvi vashanyi kubva kunyika 168 kushanyira uye kutaurirana.
IFAT Expo kwagara sechinhu chinokosha mukana zvipfuwo kwezvakatipoteredza dziviriro indasitiri kupinda pamusika dzakawanda. Vazhinji inozivikanwa mudzimba uye vatorwa kwezvakatipoteredza kudzivirira makambani vane kutora chikamu mune Expo ichi uye vakaratidza zvavo zvenyika kutungamirira kwezvakatipoteredza kudzivirirwa michina. Niutech Environment Technology Corporation (hereinafter vachinzi "Nituech") kunounza dzakawanda achitungamirira pyrolysis Michina midziyo IFAT. It kwete chete anotarisira zvokuwedzera bhizimisi rayo dzakawanda kuburikidza ichi guru rezvokutengeserana papuratifomu, asi kuuyawo nyika kuona kuwedzera China Environmental Protection maindasitiri, uyezve, kuti abate mukana uyu kuita nhaurirano uye exchanges pamwe aigona setende kubva pose, uye kuratidza nyika manyorero uye simba kwezvakatipoteredza hurumende makambani China muna ane kumativi, multi-sandara, uye rakapamhamha-siyana nenzira.
China uye vanopupurirwa ne EU CE uye Germany TUV. The rwokugadzira uye midziyo inogona kushandiswa zvakawanda mafomu uye zvinogona kushandiswa kune marara mukuru-samolecular Polymers akadai tsvina matai, tsvina mapurasitiki, mafuta sludge,-siyana tsvina mafuta, mafuta residual, kemikari tsvina, yakasimba tsvina , uye biomass. midziyo iyi aivigirwa kuna Germany, Brazil, Hungary, Estonia, India, Thailand, Malaysia, Iraq, Taiwan uye dzimwe nyika uye kumatunhu, rutsvene rakapa kurumbidzwa kubva vatengi.
With pakubuda China kwezvakatipoteredza Hurumende zvinodiwa, kuti kudiwa kwezvakatipoteredza Michina exchanges pakati mudzimba uye kunze anoramba kumukazve. Sezvo chinoumba Europe, Germany ndeimwe yenyika guru kutengeserana nzvimbo kunyanya nzvimbo pachikuva kuti Chinese makambani kuratidza zvinhu uye ruzivo zvakananga nyika. Somunhu Chinese kambani, Niutech kwete chete rinomirira chekambani muchiso simba uye zvekushandisa vanochiva asi zvinoratidzawo simba China kuti zvakatipoteredza kuchengetedzwa indasitiri. Niutech ndichakubvunzaiwo uchatsaurira kuzvitsaurira kwayo kumusika dzakawanda uye kuvaka imwe pamusoro pose kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa michina vanogadzira kwezvakatipoteredza kurapwa Michina basa rubatsiro.
Post nguva: Jul-11-2018